Edito Diso ady sy fahavalo
Edito Entin’ny tsy fahalalana !
Tsy misy izany krizin’angovo sy hanoanana ary tontolo iainana izany fa ny krizin’ny tsy fahalalana no tena manjaka eto amin’izao tontolo izao, hoy manampahaizana iray.
Fomba fisainana vaovao !
Tsy maintsy hafainganina sy hatsaraina ary atao mivaingana ao anatin’ny fotoana fohy ireo tetika sy lamina rehetra napetraka hatrany am-boalohany mba hipaka any amin’ny fiaianam-bahoaka,
Diso adversera !
Vita ny fanoloran’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta ny programa ankapoben’ny fanjakana na ny PGE, tamin’ny antenimieram-pirenena sy ny antenimierandoholona.
Raha resaka politika dia mbola ny hoe “tsy misy TIM maharesy TGV na IRD” na koa hoe “Andry Rajoelina tsy nahavita ny vitan’i Dada izany”.
Izay hatrany amin’ny ankapobeny no mbola adihevitry ny mpanara-baovao politika eto amin’ny firenena rehefa maneho hevitra na any anaty haino aman-jery io na eny an-dalambe na anaty tambajotran-tserasera. Efa ela ihany koa no nahenoana ny hoe “sinoa sy karana no tena mameno tanàna” na koa hoe “ireo frantsay ireo”. Toy izany koa ny hoe “raha mbola ny fianakaviambe iraisampirenena foana” saingy ny zava-misy aloha hatreto dia miteraka ady mangatsiaka eo amin’ny samy Malagasy avokoa ireny rehetra ireny fa raha ny vokany mipaka amin’ny fampandrosoam-pirenena dia lavitry ny afo ny kitay. Mahamenatra ny maheno ny fandokafan’ny olompirenena sasany ny filoham-pirenena ankehitriny izay nitonantonana, araka ilay fomba filazan’ny mpanao politika azy tany Frantsa nangataka fiaraha-mitantana ny nosy manodidina antsika. Ny firenena mikambana aza anefa efa nilaza fa antsika madiodio ireo nosy ireo ary ny vahoaka Frantsay indray ankehitriny no sahy midingin-drambo hanohitra ny fiaraha-mitantana fa isika manao tompony mangataka atiny ary mandoka izay mitarika antsika ho amin’izany. Rahoviana ary isika mianakavy no hahatsapa fa diso ady sy fahavalo hatrany ?